Ukuthenga Madrid - lomkhuba kuyinto ngempela ezingavamile iningi izihambi futhi abathandi ukwenza ezinye yezitolo. Leli dolobha hhayi yaqashelwa ngokomthetho njengezwe inhlokodolobha fashion ukuhweba isikhungo. Kodwa eqinisweni, kule enhlokodolobha ethokomele iSpanishi, kukhona izindawo zokuhlala eziningi ongaphakeme, lapho kukhona imikhiqizo yonke ukunambitheka kanye nesabelomali. Hhayi-ke, ake sibone ngokuningiliziwe lokho kungenziwa yezitolo Madrid. Izibuyekezo bathi impela yimpumelelo futhi kujabulise. Hlola?
Ukuze isabelomali Shopper uphawu «UKUDAYISWA» - lokhu kuyinselele oqondile ukwamukela ukuthi akunakwenzeka. Uma fan of usesitolo ufuna izingubo zokugqoka nezinto zokuhlobisa ngamanani aphansi, pre-funda "isheduli yokukhangisa." Eyokuqala ukudayisa imikhiqizo yabo ukuqala encane izindlu design wendawo - ngoDisemba. Maphakathi ebusika ngendathane Isaphulelo inethiwekhi ihlanganisa boutiques kanye eziyinxanxathela, futhi ngezinye izikhathi kulondolozwa amaphesenti angu-80. Kodwa yezitolo Februwari ayisekho zijabulisa e Madrid, njengoba Amaqoqo amasha zisuke zisekhona, futhi konke uhlala kusukela odlule, adiliza ngoJanuwari. Igagasi yokuthengisa yesibili iqala ngo-July. Kufanele kube isikhathi sokuvakashela edolobheni kule nyanga, njengoba ngo-August, ngeke ukwazi ukuthola imodeli olulodwa ehloniphekile, nakuba ngokusemthethweni Sayle ongakabi yaphela.
Flea emakethe "Rastro"
NgeSonto litshwayo Madrid sekuyisikhathi eside emakethe zigcwele, lapho izakhamuzi zomuzi wakubo ngokuthi Rasto. Yena ngokoqobo ozungezayo mgwaqo Ribera de Kurtidores, bangazihluphi lonke block futhi zonke ezizungezile angomakhelwane. Hamba lapha Yebo, uma ufuna ezitolo Madrid akasenzanga ibhajethi ngawe, kodwa futhi kujabulise. Thengisa ziphephile lapha ikakhulukazi vintage - Dress maphakathi no-lamashumi amabili leminyaka, iziqhano zokuhloba kanye umhlobiso ogogo iSpanishi, amabhokisi kanye nezigqoko. Ngaphezu izingubo, emakethe Ungathola amabhuku ezingavamile, itiye amasethi, ngisho ifenisha Antique. Numismatists bayokwazisa ezihlukahlukene zemali Antique ukuthi zithengiswa, futhi abalandeli Retro-isitayela nakanjani ukuthenga izicathulo ukuthi azokusizana izingubo ezifanele.
Gran Via kubhekwa umuzi omkhulu, futhi kwaba naye zabahamba kakhulu uqale ukuthenga eMadrid. Uphenyo 2016 usitshele ukuthi okwamanje igxile izitolo ongaswele, okubizwa ngokuthi ibhajethi brand bayindlala kakhulu emhlabeni wonke. Gran Via ungathola boutiques Zara, Bershka, Donsa futhi Bear, noma Umango. Bona ukugcina kamakhelwane kithi elaziwayo elincane Abaklami iSipanishi, isiFulentshi futhi Italy. Amanani kancane kunaleyo odlule osenyameni brand, kodwa ngezinye izikhathi ungathola i zezinhlobo emangalisayo enhle ukuthi wena cishe ukuhlangabezana othile ukubuyela eRussia. Ngaphezu kwalokho, ngokuvamile kulezi ezitolo ungabonga ukuhlangana umklami ngisho oda i imodeli okukhethekile. Phela, wonke umuntu uyazi ukuthi into, kuthiwa bathunga oda - okungcono ukuthi kungaba wezigqoko.
Madrid: elibizayo yezitolo
Kulabo enhlokodolobha Spain ukuza kusesho lemikhiqizo elite, ngemfudumalo ivula iminyango yayo ingxenye yesine ka Barrio de Salamanca. Le ndawo ezibizayo itholakala phakathi ezitaladini Paseo de la Castellana, Calle de Alcala, Avenida de la Paz futhi Avenida de Melika, futhi lapha ungathola kokubili izikhungo yezitolo futhi boutiques ezimele. Ungabona ezifana nezindlu design ngokuthi "Versace", "Dolce futhi Gabanna", "Dzhordzhio Armani", "Chanel", "Valentino" kanye nabanye abaningi. Kanye lezi zidlakela zomhlaba fashion nesizotha ngaphezulu, kodwa akukho abaklami kancane abanamakhono Spanish. imikhiqizo yabo amanani kancane, kodwa izinga nokukarisa cut ngezinye izikhathi akuyona wawungaphansi brand nge idumela emhlabeni wonke. Lesi sigaba kufanele ngokuthi "Victoria Lucchini," kanye "Adolfo Dominguez." Njengoba for yezitolo, esemgwaqweni esifundeni elite - a "Jardin de Serrano". Kukhona futhi eqoqwe brand owaziwa kakhulu ka izingubo nezicathulo, okuyinto mhlawumbe iphupho zonke ozinikezele zomhlaba.
Kulabo abakhetha Izitolo
Sekuyisikhathi eside iningi Nokho, ethenga e Madrid, njenganoma iyiphi enye European fashion city - ithuba ukuthenga umklami Iwakho at isaphulelo omkhulu. Futhi lezi zindlu amabhonasi imfashini wanelisa nje ngoba iqoqo entsha itholakala khona, futhi elidala iba engafanele ukudayiswa. Kuyinto lezi zinto ukuwela Izitolo, laphezu kwazo kulotshiwe ngokwamazwi kukhona ukuzingela enkulu. Ngakho, yini izindawo kufanele sinake, uma uhlela ngokwakho yezitolo Madrid? Brands ngokuvamile elahliwe imikhiqizo unsold emaphethelweni enhloko-dolobha, i-omkhulu yezitolo Las Rozas Village. Ungakwazi ukufinyelela ke nje ihora nesigamu ukusuka enkabeni ngebhasi №№ 628 noma 625, ithikithi kuyokulahlekisela 5 euro. Kulesi sikhungo ungathola konke. Iqoqo lokugcina "Versace" futhi "Chanel", amaphethini egqamile Abaklami Spanish ezingakenziwa kusukela ithengiswe ngentengo kokuqala, izingubo we "middle class" izitolo, okuyinto ke ithengiswe at an lentengo ngisho aphansi ... Futhi e esidayisa kukhona okunezinhlobonhlobo elikhulu izesekeli . Kukhona futhi izicathulo, izikhwama, nezinto zokuhloba, ngisho ukuhamba izimpahla kanye ebhishi ngamaholidi.
Nezingubo kubalandeli ukwethusa izethameli
Ngemva kokuvakashela zone idolobha Barrio de Chueca, omunye uyaqaphela ngokushesha ukuthi ukuyothenga Madrid - akusiyo nje imfashini yesimanje kanye ezisunguliwe yakamuva abaklami. Kule ndawo igxile ezitolo owawukhona ingubo nge rhinestones namacici, lesikhumba anolaka kuhlangene chiffon nosilika, nezicathulo ... I eyinkimbinkimbi kakhulu futhi platform izithende, inhlanganisela Amazing imibala kanye indlela yokwenza, ngokwezifiso perforation - kungaba wonke itholakala lapha. Esikhathini Barrio de Chueca njalo ebusa isimo zokudala. Abadali yobuciko ziyadayiswa lapha zenza ngokoqobo phambi izivakashi futhi ungangabazi ukuhumusha ibe yinto engokoqobo imibono nesibindi kakhulu. Phela, kule ngxenye Madrid emakethe "Mercado de Fuencarral". Abantu bathi izimpahla ke eshibhile kancane kuka ezitolo, kodwa uhla ngezinye izikhathi ezihlukahlukene futhi ewubuciko kakhulu. Lokhu rayonchik - ukutholakala sangempela abantu ngokwethukela. Kukhona bangahlangana ugqozi hippy, abathandi idwala kanye nemvelo umane kwezobuciko. Kufanele futhi agcizelele ukuthi izithombe kanye videography kule ikota kungavunyelwe, ngisho noma uthenga okuthile.
Ake zisebenze ukuqinisekisa amasheduli
Sesixoxile kancane ngalokho kwesikhathi esithile lo muzi iphatha yokuthengisa okukhulu kunakho konke izimpahla, kungakhathaliseki intengo kanye nophawu. Kodwa kwenzekani ku lonke nyaka nokuthi ungahlanganyela kanjani, uma isimiso ikhambo lakho eSpain akufani njengoba "isikhathi omazisayo"? Ngakho, ngo-March, ekugcineni ophela ukudayiswa ebusika, kanye amaqoqo omusha ufika emashalofini zonke izitolo. Kodwa into wukuthi enhlokodolobha yase imikhiqizo Spanish brand ngemali eshisiwe owaziwa ukuthi kukhona ephansi kakhulu kunalokho eRussia. Ukwahlulela ukubuyekezwa ke ungakwazi ukuthenga isikhwama ezithile "Chanel" ngenani okuzoba esikhathini esingaphansi 4 noma 5 izikhathi kuka eMoscow. Namuhla kunesimo esithi asifane ulinde wena uma uhlele yezitolo Madrid ngo-Okthoba. Cherished izimpawu «Yamadivayisi» ngeke ukuthole, kodwa amaqoqo ezintsha kanye intengo elincane ngeke sijabulise.
Schopper bonke abantu kufanele bazi ukuthi ngeSonto e Madrid, kanye wonke of Spain, - usuku off wonke umuntu kuleli zwe. Lokhu kusebenza futhi abasebenzi ezitolo ezithengisa ukuthi kukhona kuleli zwe. izitolo imodi ezisebenza lapha simi ngale ndlela: ngoMsombuluko kuya ngoMgqibelo obanzi, ngosuku lokugcina ngokuvamile saba ukudla kwakusihlwa. Ukusebenza isikhathi - esikhatsini lesinyenti kuba, kusukela 10 ekuseni kuya ku-10 ebusuku, futhi ngesikhathi esifanayo iphula ndawo. Kodwa ungakhohlwa ukuthi kwaba ngeSonto ekuseni inikeza zigcwele imakethe enkulu nge ezihlukahlukene izimpahla Retro. Ngakho-ke ngemva uhambo abaningi boutiques yesimanje uphawu ungakwazi lolu suku uthole ahlangahlangene futhi uthenge wena into, okuzoba ngawe uphawu shopping yakho yimpumelelo enhlokodolobha yase eSpain Iyokhunjulwa phakade.
Ukubuyekeza: Yini ngempela iyinhloko-dolobha ye Spain yezitolo
Madrid ngo-2016 kwaba khona isambulo abathandi abaningi yezitolo. Ngaphambili, hhayi edolobheni osebucubungulile ndawo yezohwebo aseYurophu, bambalwa kakhulu abantu base bazi ukuthi kukhona ukuthi ufunani futhi boutiques emhlabeni wonke, futhi indlu ka-Abaklami iSpanishi, kanye ezitolo 'massmarket "isigaba. Lokhu kungenxa yokuthi leli dolobha imfashini Uvule muva nje, futhi okwamanje ngakho akusho ukwazi abantu abaningi kangaka, amanani lapha, ngokuvumelana abahambi ebona, wahlala yeningi. Uma ukholelwa ukuthi ukubuyekezwa, ukuyothenga eMadrid kuzoholela yini kangaka imali eningi, efana eMilan noma eParis, ngisho izobiza, kuka uhambo yezitolo ezweni ekhaya. Umuzi umema bonke abathandi semfashini nobuhle, eqinisweni, abantu bathi omakhelwane edume kunazo boutiques basuke bagxila engxenyeni mlando edolobheni. Ngakho ungakwazi ukuhlanganisa uhambo yokuthenga indawo ye kulo muzi omkhulu.
Dorsopathies: kuyini? Indlela ukuqaphela, uswidi futhi ugweme ukugula?